दक्षिणकाली माताको दर्शन गर्नुहोला सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर एक share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ। – Social Video Khabar
गाउघरकी चेलीको जोशिलो नाच ||
खुसिको खबर भर्खरै नकुल दाइले अनुपा लाई घर भित्राउदा नकुल दाइले अनुपा सङ्ग माफ माग्दै रोय हेर्नुस
३ करोड नेपाली लाइ खुसिको खबर ६ महिना पछि सालिकराम पुडासैनिको दोशी भर्खरै सार्बजनिक हेर्नुस
२ करोड लिएर फरार मनुको यस्तो सेटिङ ! पसल किन्ने महिलासँग भयो लफ डा ! हेर्नुहोस │
मुना कार्की प्रक’रण: प्रहरीले फेला पार्यो विजयको मोबाइलमा थुप्रै यस्ता फोटो, अनु’सन्धान अब के हुन्छ?
भर्खरै गृहमन्त्री बादलको बोल्ड डिसिजन, तत्काल बाँस्कोटामाथि छानबिन गर्ने उद्घोष
Exclusive: रबि लामिछानेको हातमा पर्यो गो#प्य अडियो ! यसरि हुने भो ठुलाबडाको पत्तासाप –
गुल्मीमा यस्तो के भयो हेर्नुहोस | ३ जनाले ३ दिन सम्म पालैपालो…गरेपछि |
काेहलपुरमा यति सुन्दर रुपकाे डरलाग्दो हर्कत, कराेडाै कुम्ल्याएर टाप, सिंगाे गाउँ नै मिडियामा।
मुख्य पृष्ठ /Horoscop/दक्षिणकाली माताको दर्शन गर्नुहोला सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर एक share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ।
दक्षिणकाली माताको दर्शन गर्नुहोला सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर एक share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ।
2,2372minutes read
पढाई लेखाईमा अरुदिन भन्दा राम्रो प्रगति भएर जानेछ भने प्रतिश्पर्धामा तपाईनै अग्र पंक्तिमा आउनु हुनेछ । शैक्षिक परामर्श तथा चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर शिक्षाको पहुँच भन्दा बाहिरका मानिसहरुलाई शिक्षाको पहुचमा जोड्न सकिने छ । बंश बृद्धिको योग रहेको छ भने सन्तानको प्रगति देखेर मन प्रफुल्लित हुनेछ । परिवार आफन्त तथा साथिभाईहरुको सहयोग हुँने हुँनाले समस्याका पर्खालहरु आफै ढल्नेछन् ।
आत्मबल मजभुत हुँने हुँदा जस्तो सुकै चुनौतिको सामना गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन पाईने हुँनाले पद प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेकोछ । आमा वा आमा सरहका मानिससँग टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्दा मन खिन्न हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा राम्रो स्थान प्राप्त हुनेछ भने सुगम स्थानमा स्थानान्तरणको गतिलो सम्भावना रहेकोछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमाला लगानि गरि मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
दाजुभाई तथा छिमेकिको सहयोगले परिणाममुखि काम गर्न सकिने समय रहेकोछ । तपाईले शुरु गरेको काममा सबैको सहयोग तथा समर्थन रहनेछ । काम गर्ने शैलि परिवर्तन गरि आम्दानिका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । अदालति तथा न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् भने पुराना बिवादहरु साम्य गर्न सकने समय रहेकोछ । साझपख प्रेममा अबिस्वास सिर्जन हुने योग रहेकोछ ।
समयको ख्याल गरेर मात्र अगाडि बड्नु होला किनकि काममा बाधा तथा अरुभन्दा पछि परिने सम्भावना रहेकोछ । समाजमा प्रतिष्ठित काम गरेपनि बिपक्षहरु मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा गिराउन लागि पर्नेछन् । साझपख समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा बद्धि तथा खनिज पदार्थको कारोबार सुरु गर्न सकिनेछ । परिवारका साथ रमाई यात्राको तय हुनेछ ।
आफन्त तथा साथिभाईबाट सुनिने अप्रिय समाचारले मन दुखित तुल्याउँनेछ भने समयमा काम नबन्नाले मान सम्मानमा कमिको महशुष हुनेछ । अन्य काममा ब्यास्त रहनाले पढाई लेखाईमा समय दिन सकिने छैन । साझपख व्यापारमा लगानि गरि मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । आर्थिक कारोबार फस्टाएर जाने तथा दैनिकी सहजै बित्नेछ । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागी समय उत्तम रहेकोछ ।
बिद्या तथा प्रतिष्र्धामा बिजय हुँने योग रहेकोछ भने नयाँ ज्ञान हासिल हुनेछ । बुवा वा बुवासरहका मानिसको आषिर्वाद तथा सहयोगले महत्वपुर्ण कामहरु सम्पादन हुनेछन् । माया प्रेममा एक अर्कालाई भेटि सौहार्दपुण बाताबरणमा समय व्यातित गर्न सकिनेछ । ईच्छित कामनाहरु पुरा हुँने तथा आफ्नो मानिसबाट उपाहार तथा भौतिक सामानहरु प्राप्त हुनेछ । साझपख स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने कामकै सवादमा समाजका बिशिष्ट व्याक्तित्वहरु सँग भेटघाट हुनेछ । पढाई लेखाईमा मन जाने तथा रुचिको बिषयमा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ भने जीवन साथिसँग रमाईलो स्थानको भ्रमण गर्न सकिनेछ ।
समयको ख्याल नगर्दा पुराना तथा नयाँ कामहरु थाति रहनेछन् । ऋण लाग्ने तथा व्यापार व्यावसायबाट भनेजस्तो आम्दानि नहुँदा दैनिक कष्टप्रद हुनेछ । माया प्रेम आजको दिन टाडै रहनु बेस हुनेछ किनकी भेटमा एक अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्दा मनमुटाव बढ्नेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले खोजमुलक क्षेत्रमा भनेजस्तो उपलव्त्रि हासिल गर्न सकिनेछ ।
पढाई लेखाईमा खर्चिएको समयबाट भनेजस्तो नतिजा हात लाग्ने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रेमको गाठो कसिनेछ भने घर परिवार तथा आफन्तसँगको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्राप्तीको योग रहेकोछ भने बिलाशी बस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफुतिर लोभ्याउन सकिनेछ । साझपख गोप्य योजनाहरु सार्वजनिक नगर्नु नै उचित हुनेछ ।
मध्यान्ह सम्मको समय मध्ययम रहेकोले बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिष्पर्धिहरुनै अगाडि आउँनेछन् । सत्रु लाग्ने तथा न्यायिक निर्णयहरु तपाईको बिपक्षमा आउँनेछ । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्र तपाई आफ्नै कारणले फितलो रहनेछ । साभबाट पढाई लेखाईमा भनेजस्तो नतिजा हात लागि हुँने समय रहेकोछ । माया प्रेम तथा दाम्पत्य जीवनको गाठो कसिलो भएर जानेछ ।
एका बिहानै मनकामना को दर्सन गरि आजाको राशिफल हेर्नुहोस साथै भेटि स्वरुप लाइक कमेन्ट शयर गर्नुहोस लाभ मिल्ने छआजको राशिफल
एका बिहानै पाथिभरा माता को दर्सन गरि आजाको राशिफल हेर्नुहोस साथै भेटि स्वरुप लाइक कमेन्ट शयर गर्नुहोस लाभ मिल्ने छआजको राशिफल (भिडियो सहित)
Today’s horoscope Poush5gateko Rashifal
भर्खरै नकुल ले अनुपा लाई घर लैजादै रुदै रुदै नकुल सङ्ग गईन अनुपा छोरी खुसी भईन हेर्नु
ललितपुर हत्या काण्डको ६ औं दिनपछि हत्यारा बल्ल-बल्ल पत्ता, S*S*P* राईले हत्या बारे मुख खोले
भर्खरै हेर्नुस नकुलको घरमा फेरि खुसी छायो अनुपा घर आउदै छोरी यति धेरै खुसी माफ मागे नकुलले हेर्नुस।
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, देखेर पनि नदेखेको जस्तो नगर्नु होला ॐ लेखेर एक share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ।
बिजयसँग माया प्रेममा मुना कार्की ।। सानेपा घ८टनाको अपडेट ।।